प्रवास Archives - नेपाल आज
अमेरिकामा एक नेपालीको डुबेर मृत्यु
वैशाख ११ । अमेरिकाको उत्तरी राज्य मिनिसोटाको एक विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली बिद्यार्थीको नदीमा डुबेर निधन भएको छ । स्थानीय साउथवेस्ट मिनिसोटा स्टेट युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्ने अर्बिन थापाको शनिबार दिउँसो पौडी खेल्ने क्रममा नदीमा डुबेर निधन भएको हो । मृतक थापाका आफन्त प्रवासी नेपाली मञ्च अमेरिकाका अध्यक्ष प्रभु थापाका अनुसार डेढ वर्ष अघि उच्च शिक्षाका लागि […]
युगान्डामा नेपालीको हत्या, शव नेपाल ल्याईंदै
Posted on: April 23, 2017Posted by: Tirtha Khanal
बैशाख १० । बैदेसिक रोजगारीका लागि अफ्रिकी मुलुक युगान्डा पुगेका एक नेपालीको हत्या भएको छ । युगान्डाका एक चिनी कारखानामा सुपरभाइजरको रुपमा कार्यरत भोजपुर सलमा नौ केउरेनीपानीका पोष्ट बहादुर बुढाथोकीको हत्या भएको हो । कामदारको आक्रमणबाट पोष्टबहादुरको हत्या भएको गैरआवसीय संघ युगान्डाका अध्यक्ष रमेश कडेले बताए । चोरी आरोपमा पक्राउ एक कामदारले बुढाथोकीमाथि सांघातिक आक्रमण […]
युगान्डामा एक नेपाली कामदारको हत्या
वैशाख – ९ । युगाण्डामा एक नेपाली कामदारको हत्या भएको छ । युगाण्डास्थित एक चिनी मिलमा सुपरभाइजरको रुपमा कार्यरत संखुवासभा साल्मा केउरिनीपानीका सीताराम बुढाथोकी हत्या भएको हो । एनआरएन युगाण्डाका अध्यक्ष रमेश कँडेलले बुढाथोकीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन् । अध्यक्ष कँडेलका अनुसार उनको उनको चिनी मिलमै कार्यरत स्थानीय कर्मचारीले हत्या गरेका हुन् । उनका […]
मलेसियाकाे बुकिटबाट १८ नेपालीको उद्धार
वैशाख – ९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशन र परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा मलेसियाको बुकिट जलिल क्याम्पमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका १८ नेपालीको उद्धार गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीका समस्यालाई उच्च प्राथमिकता दिएर उद्धार र राहतको काम गरिरहेको सरकारले शुक्रबार ती नेपालीको उद्धार गरेको हो । विभिन्न मितिमा मलेसियामा पुगेका उनीहरुलाई व्यक्ति […]
ओमानबाट एक चेलीको विलाप, मलाई मार्न आँटे उद्धार गर्दिनुस्
Posted on: April 21, 2017Posted by: Tirtha Khanal
वैशाख ८ । सिन्धुपाल्चोक जुगल गाँउपालिकाको हिमाली गाँउ गोल्चे ५ की एक चेलीले ओमानको यातनाघरबाट उद्धारका लागि गुहार लगाएकी छन् । ओमानको नम्बरबाट फोन गरी २४ वर्षिया साङ्मो लामाले परिवारलाई आफुनो ज्यान खतरामा परेको भन्दै तत्काल उद्धारका लागि विलाप गरेकी हुन । उनलाई दलालले दुबई लाने भन्दै ओमान पुर्याएका थिए । गत कात्तिक १५ मा […]
वैशाख ८ । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले मलेसियाको स्थानीय बुकिट जलिल क्याम्पमा रहेका १८ नेपालीलाई बुधबार नेपाल फर्काएको छ। त्यहाँ दुःख पाइरहेको अवस्थामा उनीहरुको उद्धार गरिएको हो। नेपाल सरकारको बजेटमा हवाई टिकटसमेत खरिद गरी उनीहरुलाई स्वदेश फर्काइएको दूतावासले जनाएको छ। दूतावासका अनुसार, मलेसियाली नागरिक हत्याको आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय खेपिरहेका नेपाली लालबहादुर तामाङलाई कानुनी परामर्शदाताबाट बहस गराई […]
भारतीय कारागारमा ‘निर्दोष’ नेपाली
Posted on: April 20, 2017Posted by: Tirtha Khanal
वैशाख ७ । गत साउनदेखि पतिको रिहाइका लागि जिल्लादेखि केन्द्रसम्म धाउँदा समेत कतैबाट पहल नभएको गुनासो गरिन् । उनी यसअघि पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमक्ष पुगिन् । ‘जिल्ला प्रशासनदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धायौं,’ उनले भनिन्, ‘तर आफन्त छुटाउन कतैबाट पहल भएन ।’ कारागारमा रहेकाहरूसँग भेट्न र कुरा गर्न समेत दिइएको छैन । हिमाचलको समथंग हाइड्रोपावर कम्पनीमा […]
मानव तस्कर १ सय २१
Posted on: April 20, 2017April 20, 2017Posted by: Tirtha Khanal
वैशाख ७ । नेपाली महिलालाई अवैध तरिकाले खाडी मुलुक पुर्‍याइ घरेलु कामदारको रुपमा बेच्न एक सय २१ भन्दा बढी तस्कर तथा एजेन्ट नेपालमा सक्रिय रहेको खुलेको छ । घर मालिकको यातना सहन नसकी भागेर खाडी मुलुकस्थित नेपाली दुतावास पुगेकी महिलाले तस्करको पहिचान गरेका हुन् । पहिचान खुलेका सबै नेपाली छन् । पीडित महिलाको बयानका आधारमा […]
ईराकमा बेचिएका दुई चेलीको कारुणिक बयानः हामी जस्ता हजारौँ चेली नारकीय जीवन बाँचेका छन् (भिडियो)
Posted on: April 19, 2017April 19, 2017Posted by: मिलन गुरागाईं
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पचास हजारभन्दा बढी चेलीहरु ईराकमा छन्
हावाहुरी र हिमपातका कारण भारतमा दुई नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु
Posted on: April 8, 2017Posted by: Bishow Rimal
चैत्र–२६ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा चार्टर एकाउन्टेन्ट पढ्दै गरेका दुई विद्यार्थीको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित कुल्लु मोनालीमा हावाहुरी र हिमपातका कारण मृत्यु भएको छ । उनीहरु एक साताअघि दिल्लीबाट ट्रेकिङका लागि त्यहाँ गएका थिए । मृत्यु भएकामा काठमाडौं निवासी विप्रा पोखरेल र चम्पापुर कञ्चनपुरका सन्तोष ऐर छन् । बुधबार साँझ ८ बजे अचानक चलेको हावाहुरी र हिमपातमा […]
मानव तस्करको नयाँ रुट, अवैध तरिकाले अमेरिका प्रवेश
Posted on: March 31, 2017Posted by: Tirtha Khanal
चैत्र १८ । मानव तस्करले लाखौं रुपैयाँ लिई नेपालीलाई अवैध तरिकाले ल्याटिनअमेरिकी राष्ट्र हुँदै अमेरिका प्रवेश गराउन नयाँ बाटो प्रयोग गर्न थालेको छ । नयाँ बाटो प्रयोगसँगै तस्करलाई लाखौँ रुपैयाँ बुझाई अवैध तरिकाले अमेरिका प्रवेश गर्ने नेपालीको संख्या बढेको छ । ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र निकारागुवाले नेपाली पासपोर्टवाहकलाई ‘अन अराइभल’ भिसा खुला गरेपछि तस्करले त्यसको फाइदा […]
साउदीमा आममाफी पाएकालाई स्वदेश फर्काउन सरकारले शिविर सञ्चालन गर्ने
Posted on: March 30, 2017April 3, 2017Posted by: Bishow Rimal
चैत्र–१७ । अवैधानिक रुपमा लामो समयदेखि साउदी अरवमा बस्दै आएका नेपालीलाई घर फिर्तीका लागि सरकारले शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ । साउदी सरकारले मार्च २९ (चैत्र १६ गते)देखि ९० दिनभित्र गैरकानुनी रुपमा बस्दै आएका नेपालीलाई आममाफी दिइ देश फर्कन अवसर दिएको थियो । सरकारले आममाफी पाएका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्कानका लागि नेपालीहरुको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा घुम्ति […]
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि श्रीमतीबाटै खतरा !
Posted on: March 30, 2017Posted by: Tirtha Khanal
चैत १७ । मध्य तराईका जिल्लामा वैदेशिक रोजगारीका कारण विकृति बढ्नुका साथै हत्याहिंसाका घटनासमेत बढेका छन् । अधिकांश हत्याहिंसाका घटनामा अनैतिक यौन सम्बन्ध र सम्पत्तिको लालच देखिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । २०७३ कार्तिक २६ गते जनकपुर उपमहानगरपालिका रजौलका श्रीराम ठाकुरको हत्या भयो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको केही दिनमै श्रीमती नितु मिश्रको मिलेमतोमा ठाकुरको हत्या […]
महिला बेचविखनमा अध्यागमनकै कर्मचारीको मिलेमतो, निःशुल्क जाने कोही भेटिएनन्
Posted on: March 28, 2017Posted by: netra
चैत्र – १५ । अवैध रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई खाडी राष्ट्रमा पठाउने कार्यमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको संसदीय टोलीले जनाएको छ । साउदी अरब, कुबेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेर आज स्वदेश फर्किएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको टोलीले अध्यागमन विभागमा मानवतस्करहरुले जालो बनाएको बताएको छ […]
वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवार बिरामी भएमा आर्थिक सहयोग पाउने
Posted on: March 27, 2017Posted by: netra
चैत – १४ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका सदस्यलाई गम्भीर रोग लागेको अवस्थामा उनीहरुलाईसमेत सरकारले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । उनीहरुलाई क्यान्सर, मृगौला प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया, पार्किन्सन र अलमाइजरसहित पाँच किसिमको रोग लागेमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले बढीमा रु पचास हजारसम्मको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज […]
Posted on: March 27, 2017Posted by: Tirtha Khanal
चैत १४ । वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक सातसय देखि आठ सय नेपाली जाने गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी कतार र मलेसिया जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी रमा भट्टराईले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१र०७२ सम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक १५ सय नेपाली जाने गरे पनि […]
अमेरिकाको युवा संयोजकमा सुमनको उम्मेदवारी
Posted on: March 22, 2017March 22, 2017Posted by: धुर्ब रिजाल
चैत–९ । गैरआवसीय नेपाली संघ अमेरिकाको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा विभिन्न पदहरुमा उम्मेदवारी घोषणा पनि सुरु भएको छ । हालै गैरआवसीय नेपाली संघ अमेरिका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को युवा संयोजकमा सुमन हुमागाईंले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अन्तर्गत अमेरिकामा रहेका आठ च्याप्टरमध्ये सबैभन्दा ठूलो न्यूयोर्क च्याप्टरमा युवा संयोजकको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका हुमागाईंले […]
मंगली तामाङको घर कहिल्यै बिर्सने छैन् : राजकुमार ह्यारी
चैत्र ८ । ब्रिटिश राजकुमार ह्यारीले नेपाल अत्यन्तै चित्ताकर्षक मुलुक भएको भन्दै पर्यटकहरुलाई नेपालको भ्रमण गर्न सुझाव दिएका छन् । गत वर्ष नेपालको भ्रमण गरेका र अफगानिस्तानमा गोर्खा सैनिकहरुसंगै बसेका राजकुमार ह्यारीले गोर्खालीहरुको बहादुरी र आतिथ्यको पनि खुलेर प्रशंसा गरे । नेपाल ब्रिटेनबीच संबन्ध कायम भएको दुईसय वर्ष पूरा भएको अवसरमा लण्डनस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित […]
साउदी अरबमा गैरकानुनी कामदारलाई ’९० दिने आममाफी’
चैत्र ८ । साउदी अरबले गैरकानुनी हैसियतका कामदारलाई बिनासजाय स्वदेश फिर्न पाउनेगरी ९० दिनको आममाफीको घोषणा गरेको छ । मार्च २९ मार्च २९ गतेदेखि लागू हुनेछ। साउदीका राजकुमार, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री मोहमद विन नैफले ‘उल्लंघनबिनाको देश’ अभियान सुरु गर्दै आममाफी दिएको हो । सरकारले तीन वर्षअघि पनि आममाफी दिएको थियो। त्यतिखेर ३५ हजार नेपाली स्वदेश […]
विदेशी जेलमा छन् दुई सय ३१ नेपाली, कतिपयलाई मृत्युदण्डको सजाय
Posted on: March 20, 2017Posted by: Tirtha Khanal
चैत ७ । वैदेशिक रोजगारीका लगि विभिन्न देशमा पुगेका दुई सय ३१ भन्दा बढी नेपाली गम्भीर प्रकृतिको अभियोगमा जेलजीवन बिताइरहेका छन् । हत्या लागूपदार्थ, सडक दुर्घटना लगायत मुद्दामा दुई सय १९ पुरुष र १२ जना महिला जेल परेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका वैदेशिक जानकार सुशील ढुंगानाका अनुसार साउदीमा ७६, कुवेतमा ६१, कतारमा ५०, युएईमा १९, मलेसियामा […]
युएईमा नेपालीको सवारी दुर्घटनामा निधन
Posted on: March 19, 2017Posted by: Tirtha Khanal
चैत्र ६ । संयुक्त अरब ईमिरेट्स (युएई)को अलऐन सवारी दुर्घटनामा परी नेपालीको निधन भएको छ । युनाईटेड सेक्युरिटी ग्रुप कम्पनी अलऐनमा कार्यरत कन्चनुपर दैजी २ बसन्त थलाका निराजन शाहीको गएको बिहीबार राति कार दुर्घटनामा परेर निधन भएको हो । आफु संगै कार्यरत साथीहरुसँग नजिकैको सपिङ मलबाट कम्पनीको कोठामा फर्कर्ने क्रममा दुर्घटना भएको उनी कार्यरत युनाइटेड […]
फ्री भिसा र टिकट लागूको २० महिनामा मलेसिया र खाडीमा ६ लाख नेपाली
चैत ६ । वैदेशिक राजगारीमा जाने युवाका लागि फ्री भिसा र टिकट लागू भएको २० महिना अवधिमा ६ लाखभन्दा बढी युवा मलेसिया र खाडी मुलक पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म पाँच लाख ४२ हजार दुई सय २४ जना युवा कामकै लागि म्यानपावर कम्पनीमार्फत मलेसिया, साउदी अरब, दुबई, कतार, ओमोन, बराइन […]
पुटिनसमक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेश
Posted on: March 17, 2017Posted by: Tirtha Khanal
चैत्र ४ । रुसी महासङ्घका लागि नेपाली राजदूत ऋषिराम घिमिरेले मोस्कोस्थित ग्राण्ड क्रेमलिन दरबारमा आयोजित एक समारोहबीच त्यहाँका राष्ट्रपति भ्लादिमिर भ्लादिमिरोभिच पुटिन समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका छन् । समारोहमा राजदूत घिमिरेले नेपालको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रुसी महासङ्घको निरन्तर प्रगति र समृद्धिको कामना गरेको सन्देश प्रदान गरेका थिए […]
साढे चार लाख नेपाली महिलाको खोजी हुँदै
चैत ४ । गएको सात वर्षमा राहदानी पासपोर्ट लिएका चार लाख ५९ हजार ५४२ महिलाले कुन कस्तो प्रयोजनका लागि राहदानी लिए भन्ने यकीन हुनसकेको छैन । राहदानी विभागका अनुसार सन् २०१० देखि २०१७ जनवारीसम्म सात लाख ६९ हजार ५४२ महिलाले राहदानी लिएका छन् । जसमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको […]
कामदारको समस्या समाधान गर्न खाडी मुलुक र मलेसियामा घुम्ती शिविर
Posted on: March 15, 2017Posted by: Bishow Rimal
चैत्र–२ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको समस्या समाधान गर्न खाडी मुलुक र मलेसियामा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ । शिविरमा राहदानी नवीकरण, यात्रा अनुमतिपत्र, श्रम सम्झौताको करार अवधि नवीकरण, बिमा नवीकरण, कल्याणकारी कोषको रकम थप लगायत काम गरिनेछ । गत फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीको समस्या समाधान गरी प्रतिवेदन […]
भारतमा हिमपहिरोमा परी दुई नेपालीको मृत्यु, एक बेपत्ता
Posted on: March 14, 2017Posted by: Tirtha Khanal
चैत्र १। भारतको पिथौरागढमा हिमपहिरोमा परी दुई नेपालीको मृत्यु भएको छ भने एकजना बेपत्ता भएका छन् । मृत्यु हुनेमा बैतडी, पुर्चौडी नगरपालिका–२ महादेवस्थानका ५० वर्षीय मोहन चन्द र दार्चुला हुती–८ का २१ वर्षीय शरद कुँवर छन् । सोही ठाउँका २० वर्षीय भूपेन्द्र कुँवर भने हिमपहिरोमा परी बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक […]
मलेसियामा आप्रवासी नेपालीमाथि चरम श्रम शोषण
Posted on: March 11, 2017Posted by: netra
फागुन २८। कास्की मिजुरे गाविस–२ का दीपक अधिकारी तीन वर्षदेखि मलेसियामा श्रम बेचिरहेका छन् । भने जति तलब पाएका छन् तर एउटै साँघुरो कोठामा कोच्चिएर १५ जना बस्नु पर्दा उहाँलाई कारागारमा बसेकोभन्दा बढी सकस हुन्छ । कैलाली भेड्पु–४ का अशोककुमारले पनि मलेसियामा पसिना बगाएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । महिना मरेपछि हातमा तलब । […]
अष्ट्रेलियामा ’सेफ्स पप अप डिनर’ सम्पन्न
Posted on: March 9, 2017March 9, 2017Posted by: netra
फागुन – २६ । युनिग्लोव विजनेस ग्रुप तथा क्युइनस्फोर्ड कलेजको सहर्काय र टु टेबलको आयोजनामा अष्ट्रेलियाको व्रिस्वेनमा एकदिने नेपाली खाना प्रवद्र्धन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ’सेफ्स पप अप डिनर’ नाम दिइएको उक्त कार्यक्रममा नेपाली परम्परागत खानालाई आधुनिक शैलीमा फ्युजन गरी प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाली मौलिक खानालाई अन्तराष्ट्रिय जगतमा अभिवृद्धि गर्दै नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई […]
अब अष्ट्रेलियामा जागिर पाउन कठिन, ४५७ भिसा बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, के हो ४५७ भिसा ?
Posted on: March 2, 2017March 3, 2017Posted by: netra
फागुन – १९ । अमेरिकापछि अब अष्ट्रेलिया सरकारले पनि कामदारका लागि दिँदै अाएकाे ४५७ भिसामा कडाइ गर्ने घोषणा गरेको छ । अष्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पीटर डटनले फास्टफूड उद्योगमा काम गर्ने कामदारका लागि दिदै आएको ४५७ भिसा अष्ट्रेलिया सरकारले बन्द गर्न लागेको बताएका हुन् । उक्त निर्णयले नेपाल, भारतलगायतका देशका प्रवासी कमदार प्रभावित हुने छन् । सबैभन्दा […]
कोरियामा नेपाली कामदारको माग बढ्यो, १० हजार कामदार लैजाने
फागुन–१६ । कोरिया सरकारले आगामी वर्षका लागि १० हजार २ सय नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत सन् २०१७ मा ३ हजार १ सय कामदार लिएको कोरियाले यस वर्ष नेपाली कामदारको कोटा बढाएको हो । नेपाली पक्षले आउँदो चैतमा आवेदन र जेठमा परीक्षा सञ्चालनका लागि कोरियाको मानव संशाधन बोर्डलाई गरेको प्रस्ताव […]
साउदीले कामदारमाथि लेवी लगाउने तयारी, नेपाली कामदारलाई समेत असर पार्ने
Posted on: February 27, 2017Posted by: netra
विगत १७ वर्षदेखि जर्मन नागरिक डोमिनिक स्टेक आफ्नो परिवारसहित साउदीमा बस्दै आएका थिए । उनको परिवार साउदीमा यति रमाएको थियो कि उनीहरुले जर्मनको बारेमा सबै बिर्सिसकेका थिए । तर, साउदीमा आएको आर्थिक गिरावटबाट उनी अब यस देशमा बस्न सक्ने छैनन् । ‘पछिल्लो महिनामा साउदीमा आएको भारी आर्थिक गिरावटका कारण यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन ।’ […]
अमेरिकामा पनि नेपाली विषयको पढाइ हुने
फागुन १६ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन राज्य सरकारले नेपाली विषयलाई अध्यापन हुने भाषाका रुपमा सूचीकृत गरेसँगै नेपाली विषय अध्ययनको ढोका खुलेको छ । वासिङ्टन राज्यको एसिया प्रशान्त मामिला हेर्ने राज्य आयोगका आयुक्त गैरआवासीय नेपाली मोहन गुरुङले आफ्नो प्रयासमा सो राज्य सरकारले त्यहाँका शैक्षिक संस्थामा अध्यापनका लागि नेपाली विषयलाई पनि सूचीकृत गरेको बताए । हाल […]
Posted on: February 26, 2017Posted by: Tirtha Khanal
फागुन १५ । सुन्दर भविष्यको सपना बोक्दै अमेरिका प्रवेश गरेका कैयन् दम्पतीहरू त्यहाँ पुगेको केही समयपछि एक्लाएक्लै बस्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नवदम्पतीदेखि बच्चा भइसकेकाहरूसम्म पनि सम्बन्ध विच्छेद भएका घटनाहरू त्यहाँ देख्न सकिन्छ । यसरी सम्बन्ध विच्छेद गरी बसेकाहरूमा बच्चाको रेखदेख कसले गर्ने भन्ने विषयमा समेत मुद्दा पर्ने गरेको छ । त्यसको वारेसनामा लिनका […]
समयावधि सकिएर पनि साउदीमै बसिरहन वाध्य नेपाली कामदार
Posted on: February 25, 2017Posted by: netra
फागुन – १४ । सप्तरीका कालिचरण साह पाँच वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदीअरब पुग्दा दुई वर्षपछि नेपाल फर्किहाल्छु भन्ने सोचेका थिए । साउदीमा श्रम स्वीकृतिको अवधि दुई वर्ष मात्रै भएकाले म्याद थप्नका लागि भए पनि नेपाल फर्किनैपर्ने सोझो बुझाई उनको थियो । राम्रो काम पाएको अवस्थामा श्रम स्वीकृतिको म्याद थप्न नेपाल आई घर परिवारसँग भेटघाट […]
जापानमा राष्ट्रिय नायक अवार्डबाट पहिलोपटक नेपाली युवा सम्मानित
फागुन ११ । विभिन्न विधामा उत्कृष्ट भएका आधारमा गरिने राष्ट्रिय नायक अवार्डबाट जापानमा एक नेपाली सम्मानित भएका छन्। सामाजिक काममा सक्रिय भएर उत्कृष्ट भएको भन्दै जापानको एक संस्थाले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय युवा नायक अवार्डबाट पहिलोपटक नेपाली युवा ३७ वर्षका जिज्ञानकुमार थापा सम्मानित भएका हुन्। नेपाली नागरिक भएर पनि जापानबाट सामाजिक काममा उष्कृष्ट […]
मलेसियामा मृत्युदण्ड सुनाइएका १४ नेपालीको चित्कार मलाई फाँसी दे
Posted on: February 21, 2017Posted by: netra
माघ १० । जेलमा नेपाली अधिकारी भेट्न पुग्दा ‘मलाई फाँसी दे’ भन्दै ठुल्ठूलो स्वरले चिच्याउँछन् उनी । आँखाभरि आँसु पार्दै भन्छन, ‘अब आस र्मयो ।’ रोजगारका लागि मलेसिया पुगेका नुवाकोटका यी युवा १० वर्षदेखि जेलजीवन बिताइरहेका छन् । मलेसियाको संघीय अदालतबाट मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका उनले पटक–पटक जीवनरक्षाका लागि सरकारसँग अनुरोध गरे । तर, कुनै पहल […]
फिलिपिन्समा युनिभर्सिटी स्तरिय प्रतियोगितामा फस्ट रनर-अप बनिन् नेपालकी चेली अमिशा कार्की
Posted on: February 20, 2017February 20, 2017Posted by: netra
फागुन – ९ । फिलिपिन्सको सान कार्लाेस सिटी पेगासेननस्थित भिर्गेन मिलाग्रोसा युनिभर्सिटी फाउन्डेसनले सञ्चालन गरेको विश्वविद्यालय स्तरिय मिस्टर एण्ड मिस भिएमयुएफ – २०१७ प्रतियोगितामा नेपालकी चेली अमिशा कार्की फस्ट रनर-अपको ताज पहिरेकी छिन् । उक्त प्रतिस्पर्धामा १५ युनिभर्सिटीका १५ छात्र र १५ छात्राले भाग लिएका थिए । प्रतिस्पर्धामा भाग लिने उनी एक्ली नेपाली चेली हुन् […]
Posted on: February 20, 2017Posted by: Tirtha Khanal
फागुन ९ । वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा सप्तरीको जमुनी मधेपुरा गाविसबाट कतार गएका राम सरदारको मृत्यु भएको छ । जमुनी मधेपुरा–९ बस्ने ३५ वर्षीय सरदारको कोठामा सुतेको अवस्थामा मृत्यु भएको बताइएको छ । एक वर्षअगाडि कतार गएका उनको मृत्युको कारणबारे खुल्न नसकेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । टुसी इन्टरनेसनल म्यानपावर कम्पनी काठमाडाँैबाट रोजगारीका लागि कतारमा सरदार […]
प्रजुनकुमार अधिकारीकाे संयोजकत्वमा नयाँ शक्ति नेपालको मकाउ आइएनस समाज गठन
फागुन ९ । नेपालको प्रवास संगठन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज (आइएनएस) मकाउ गठन भएको छ । नेपाली समाज हङ्कङका संयोजक प्रेम लामाको उपस्थितिमा भएको भेलाले प्रजुन कुमार अधिकारको संयोजकत्वमा ४१ सदस्यीय आइएनएस मकाउ गठन गरेको प्रवास प्रादेशिक समितिका सहसयोजक शंकर भण्डारीले जानकारी दिए । भेलाले उप–संयोजकमा यम बिलास भट्टराई र ईश्वर श्रेष्ठ, महासचिब नगेन्द्र खत्री , […]
कुवेतमा ५ नेपालीलाई मृत्युदण्ड !
फागुन ९ । कुवेतमा ५ नेपालीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । लागुऔषध कारोबार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका चितवनका जीवन रानाभाट, काठमाडौंका लाक्पा शेर्पा, कास्कीका पदमबहादुर गुरुङ, बाँकेका तारामान केसी र निमा शेर्पालाई त्यहाँको तल्लो अदालतले मृत्यु दण्डको सजाय सुनाएको हो । उनीहरु सुलेबियास्थित केन्द्रीय कारागारमा छन् । कुबेतस्थित नेपाली दुताबासका अनुसार सिन्धुपाल्चोकका साजन कार्कीलाई भने […]